Ubuhle base-Afrika-baseMelika nenani elingenakulinganiswa le-Melanin: I-Melanin inenani elingenakulinganiswa, kuyilungelo ukunikezwa ngayo "I-Melanin ingumguquli wamandla omzimba"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Agasti 22, 2020 00: 00 Awekho amazwana
I-Melanin inesibopho sokwenza nokwenza impilo yomuntu emhlabeni. Nguye ogcina uMuntu oMnyama ethintana njalo namandla emvelo, amandla oMoya namandla akhazimulayo oMkhathi.
Izimpi Zomhlaba: Abansundu / ama-Afrika asebenza njengezihlangu zabantu ukusindisa amandla ahlanganyelanayo; inani labo alaziwa ngokuqondile; kodwa-ke, kwakukhona amakhulu, izinkulungwane futhi kungani kungenjalo izigidi zabamnyama ezazilwa kulayini wangaphambili egameni lamandla ahlanganyelwe ngesikhathi sezimpi zezwe ezi-2 (ngo-1914 kuya ku-1918 nango-1939 kuya ku-1945)
I-Oct21 06: 03